Shuruudaha Adeegsiga - Sawirka Sawirka
Dib u habeynta ugu dambeysa: 12/19/2018
AQBALIDA SHURUUDAHA ISTICMAALKA
Shuruudaha isticmaalka waxaa galaya oo u dhexeeya adiga iyo IKE SMART CITY, LLC (“Shirkadda”, “annaga,” ama “annaga”). Shuruudaha iyo xaaladaha soo socda (“Shuruudaha Isticmaalka”) waxay maamulaan helitaanka iyo isticmaalka IKE Kiosks iyo sifooyinka lagu bixiyo IKE Kiosks. Isticmaalka IKE Kiosks iyo sifooyinka waxay ku jirtaa khatartaada.
Fadlan si taxadar leh u akhri Shuruudaha Isticmaalka ka hor inta aadan ku biirin IKE Kiosks ama mid ka mid ah sifooyinkaas. Iyada oo la adeegsanayo dukaamada IKE ama mid kasta oo ka mid ah astaamaha ama adoo gujinaya inaad aqbasho ama aad ogolaato Shuruudaha Isticmaalka marka xulashadani ay kuu suurtogasho, waxaad aqbashay oo aad ogolaatay inaad ku xidhnid oo aad adeecdo Shuruudaha Isticmaalka. Haddii aadan rabin inaad ogolaato Shuruudaha Isticmaalka, waa inaadan helin ama isticmaalin IKE Kiosks ama mid ka mid ah sifooyinkaas.
Waxaa laga yaabaa in aan dib u eegno oo aan cusbooneysiinno Shuruudaha Isticmaalida waqti ka waqti si ikhtiyaari ah. Dhamaan isbeddellada ayaa isla markiiba wax ku ool yihiin markaan diro oo aan codsano dhammaanba helitaanka iyo isticmaalka IKE Kiosks ama wax kasta oo ka mid ah sifooyinkas marka kadib. Isticmaalka joogtada ah ee IKE Kiosks ama mid kasta oo ka mid ah astaamaha soo socda kadib marka la soo diro Shuruudaha Isticmaalida macnaheedu waa inaad aqbasho oo aad ogolaato isbeddelada. Waxaa lagaa rajeynayaa inaad boggan fiiriso mar kasta oo aad gasho IKE Kiosks ama mid ka mid ah sifooyinkiisa si aad u ogaato isbeddel kasta, maadaama ay kugu xirayaan.
Intaa waxaa dheer, waxaad qiraysaa in sifooyinka qaarkood ee lagu bixiyo IKE Kiosks ka shaqeeysiyo ama ay bixiso, ku daraysa API (yada), ama haddii kale loo baahan yahay isgaadhsiin ama iskudubarid dhinacyada saddexaad. Waanu kuu sheegi doonaa haddii mawduuc ay ku lug leedahay koox saddexaad ah wakhtiga aad dooratid. Annagu ma xakameyneyno dhinacyadan saddexaad waxaanad ku xirnaan doontaa qaanuunkooda iyo shuruudaha adeegga/shuruudaha isticmaalka marka aad la kulantid sifooyinka oo ku lug leh koox saddexaad. Sababtan awgeed, waxaan kugula talineynaa in aad dib u eegto sifooyinkas iyo shuruudaha adeega / shuruudaha isticmaalka kahor intaan la galin waxkasta oo ay bixiso dhinacyada saddexaad. Tusaale ahaan, qaabka Wayfinding ee IKE Kiosks waxay isticmaalaan API Khariidadaha Google, waxaadna ku xidhantahay Shuruudaha Adeegyada ee Google ee aad adeegsaneysid habka Wayfinding.
ISTICMAALKA MAMNUUCA AH
Waxaad isticmaali kartaa IKE Kiosks iyo mid ka mid ah sifooyinka kaliya ee ujeeddooyinka shakhsiga ah, kuwa aan ganacsiga ahayn iyo kan sharciga ah oo kaliya iyo iyadoo la raacayo Shuruudaha Isticmaalka.
Waxaad ogolaatay inaadan isticmaalin IKE Kiosks ama mid ka mid ah sifooyinkisa:
Si kasta oo jebisa shuruucda federaalka, gobolka, degaanka, ama sharciga caalamiga ah ama xeerarka ama kobcinta waxqabadyo sharci darro ah.
Ujeedada ka faa’iideysiga, waxyeelaynta, ama isku dayga inaad ka faa’iidaysato ama waxyeello u geysatid, ama inaad si ula-kac ah u disho caruurta yar-yar si kasta oo ay u soo bandhigto waxyaabaha aan habooneyn, waydiiso macluumaad shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo, ama haddii kale.
Si aad u soo dejiso, u dirto, soo bandhigto, aragtid, dirto, hesho adhiga oog ama u gudbiso wixii qalab ah ee ku xad gudbi kara shuruucda federaalka, gobolka, degaanka, ama caalamiga ah ama xeerka ama xuquuqda qof kasta ama shaqsi kasta oo lagu meeleeyo xukun kasta.
Si aad u soo dejiso, u dirto, soo bandhigto, aragto, dirto, ogaysiiso, ama u gudbiso wixii qalab ah ee jinsi ahaan ama fara xumeyn, foorjarin, fisqi, ficil, xadgudub, xadgudub, dhibaateyn, rabshad, nacayb, amar-diidnimo ama aan habooneyn.
Si aad u gudbiso, ama u soo iibsato diritaanka, wax kasta oo xayaysiis ama xayaysiinta dallacsiinta ama ujeedka.
KORMEERKA IYO FULINTA
Shirkadda, iyada oo kali ah, waxay go’aan ka gaari doontaa in dhaqankaagu yahay mid waafaqsan Shuruudaha Isticmaalka. Waxaan xaq u leenahay inaanu kormeerno adeegsiga IKE Kiosks iyo mid kasta oo ka mid ah sifooyinka iyo wax kasta oo ficil ah oo aan u baahannahay ama aan ku haboonayn go’aankayaga keligeen ah haddii aan rumeysannahay in dhaqankaagu uu ku xadgudbay Shuruudaha Isticmaalka, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidid u gudbin sharci fulin iyo xaq u lahaanshaha iskaashi ee baaritaan kasta, iyo xuquuqda joojinta ama shakigaaga helitaanka dhamaan ama qeyb ka mid ah shabakada IKE Kiosk.
WAQOOYINKA IYO WAXYAABAHA HADDII AAD KA QAADO SHAQADA IYO WAX-KA-QAADASHADA, WAXYAABAHA IYO ADEEGAHA ADEEGA LOOGU TALAGALAY CODSIGA WAXYAABAHA LAGA HELAY CIIDAMADA AMA WAXYAALAHA KA QAYBGALAYO HESHIISKA, AMA LAGU QAATO WARBIXIN KU SAABSAN SHARCIYADA, KA QAADASHADA SHARCIYADA HESHIISKA SHARCIYADA.
Waxaad ogolaatay inaad difaacdo, magdhowdo, oo aad wax u qabatid shirkadda, shirkadaha, shatiyeyaashooda, bixiyeyaasha adeegga, iyo sarkaalkooda, agaasimayaasha, shaqaalaha, qandaraaslayaasha, wakiillada, shatiyeyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, , kharashyada, magdhawga, xukunka, abaalmarinta, khasaarihii, kharashyada, kharashyada, ama khidmadaha (oo ay ku jiraan kharashka qareenka macquul ah) oo ka soo baxaya ama la xidhiidha xadgudubka Shuruudaha Isticmaalka ama isticmaalka IKE Kiosks iyo mid ka mid ah sifooyinkaas.
Dhammaan arrimaha la xiriira IKE Kiosks, sifooyinka iyo shuruudaha Isticmaalka iyo khilaaf kasta ama sheegasho ka soo baxa ama la xidhiidha (kiis kasta, oo ay ku jiraan khilaafaadka ama sheegashooyinka aan qandaraaska lahayn), waa in lagu maamulaa oo lagu muujiyaa sida waafaqsan sharciyada ee Gobolka Ohio iyadoo aan wax saameyn ah ku lahayn doorashooyinka ama khilaafaadka sharciga ama xeerka.
DIIDMADA DAMAANAD QAADKA
ISTICMAALKAAGA EE DUKAAMADA IKE IYO SIFOOYINKISA WAA KHATARKAADA. WEBSITE-KA, WAXYAABAHA LAGA HELI KARO, WAXYAABAHA AMA WAXYAALAHA AMA WAXYAALAHA KU SAABSAN KARTAA IKE KA YIHIIN IYO HADDII QODOBO KALA DUWAN “WAA SIDA” IYO “WAXAA LAGU QAADO” BASIS, WAXAA LAGU DHAGAYSO WARBIXIN KU SAABSAN, WAXAA LAGA HELI KARO KA HORREEYA LOOGU TALAGALAY DADKA QOFKA KA QAYB QAATU GARGAARIDA SHIRKADDA SHIRKADAHA LAGU QAADO WARRAXA AMA WAKIILKA ILAALINTA LAGU QAADO SHARCIYADA, AMMAANKA, UJEEDADA, TAYO, AMA LABAAD, AMA LAGA HELI KARTAA IYO KOOWAAD KA QAADO. ISTICMAALKA LAGU QAADO SHARCIISKA, WAXAAD KA QAADAN KARTAA SHIRKADDA LAGU QAADO SHARCIYADA SHAQAALAHA AMA FAA’IIDOOYINKA KA QAADASHO IKEED IYO WAXAAD KA QAADO WAXYAABA LAGA QAADO, WAXYAABO, BADBAADO AMA LAGA HELI KARO, WAXYAABAHA WAXAA LAGU QAATO, WAXAA LAGU QAATO VIRUSES AMA KALE EE LOO HELI KARO, AMA WAXYAALAHA KA HORTAGIDA IYO WAXYAABAHA KA HELI KARO WAXYAABAHA KA HELI KARTAA WAXYAABAHA AMA KA BIXISO.
ILAA HEERKAUGU HOOSEEYA EE SHARCIGU BIXIYO, SHIRKADDA WAXAY DIIDMA KU DHAWAAQDAY DHAMAAN DAMMANADA NOOC KASTA, HA AHAATO MID CADDAYNAYA AMA QEEXAYA, XADGUDUB, AMA HADDII KALE, OO AY KU JIRAAN LAAKIIN AAN KU XADDIDNEYN WAX DAMAANAD AH OO GANACSI AH, AAN XAD-GUDUB AHAYN, IYO UJEEDKA UJEEDADA GARKA AH.
KUWA KA HOR KU XUSANI WAX SAAMEYN AH KUMA LAHA WAX DAMAANAD AH TAAS OO AAN LAGA SAARI KARIN AMA KU XADIDANAYN SHARCIGA SHARCI AHAAN.
Macluumaadka lagu soo bandhigay ama loo marayo IKE Kiosks iyo muuqaalkiisa waxaa loo diyaariyey oo kaliya ujeedo macluumaad guud. Ma xaqiijin karno saxnaanta, dhammaystirka, ama faa’iidada macluumaadkaan. Wax kasta oo aad ku kalsoon tahay oo aad ku qorto macluumaadka noocaas ahi waa khatar aad u weyn. Waan ka qaadeynaa dhammaan masuuliyada iyo masuuliyadda ka timaad kalsooni kasta oo lagu rakibay qalabkaas adiga ama qof kasta oo booqde ah IKE Kiosks, ama qof kasta oo laga yaabo in lagu wargeliyo mid ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Dhammaan macluumaadka aan ku soo aruurinno dukaamada IKE ama sifooyinkeeda waxay ku xiran tahay Arimaha Khaaska ah. Adoo adeegsanayo IKE Kiosks ama mid kasta oo ka mid ah sifooyinka, waxaad ogolaatay dhamaan tallaabooyinka naga qaaday annagoo tixgelinayna macluumaadkaaga si waafaqsan Nidaamka Qarsoodiga.
Shuruudaha Isticmaalka iyo qaanuunka Qarsooniga ah waxay ka dhigan tahay heshiiska keliya iyo heshiska dhan ee u dhexeeya adiga iyo shirkadda ku saabsan IKE Kioskska iyo sifooyinka iyo waxay ka baddalaan tan iyo fahamka hore, heshiisyada, matalaadda, iyo damaanad-qaadyada, labadaba qoraalka iyo afka, ee ku saabsan IKE Kiosk iyo waxyaalaheeda.
Shuruudaha isticmaalka - Boostada Sawirka
Shuruudaha isticmaalka waxaa soo galaya oo u dhexeeya adiga iyo IKE SMART CITY, LLC (“Shirkadda”, “annaga,” ama “annaga”). Shuruudaha iyo xaaladaha soo socda (“Shuruudaha Isticmaalka”) ayaa xakameynaya helitaankaaga iyo isticmaalka Boostada Sawirka (“sifooyinka”) ee lagu bixiyo IKE Kiosks. Isticmaalka Khariidadda iyo IKE Kiosks waa khatar adiga kuu gaar ah.
Fadlan akhri Shuruudaha Isticmaalka si taxaddar leh ka hor intaadan kudhaqmin sifooyinka.Iyada oo la adeegsanayo Habka ama adoo gujinaya inaad aqbalo ama aad ogolaato Shuruudaha Isticmaalka marka xulashadani ay kuu suurtogasho, waxaad aqbashay oo aad ogolaatay inaad ku xidhnid oo aad u hoggaansanaato Shuruudaha Isticmaalka. Haddii aadan rabin inaad ogolaato Shuruudaha Isticmaalka, waa inaadan helin ama isticmaalin Habka.
Waxaad isticmaali kartaa sifooyinka oo kaliya ujeedooyinka sharciga ah iyo sida waafaqsan Shuruudaha Isticmaalka. Waxaad ogolaatay inaadan isticmaalin sifooyinka:
Si aad u dirto, si qarsoodi ah u heshid, ama u gudbiso wixii qalab ah ee ku xad gudbi kara shuruucda federaalka, gobolka, degaanka, ama caalamiga ah ama xeerka ama xuquuqda qof kasta ama shaqsi kasta oo lagu dhejiyey xukun kasta.
Si aad u dirto, si ogaan ah u hesho, ama u gudbiso wixii qalab ah ee jinsi ahaan ama fara-xumeeysi, fara-xumeyn, fisqi, ficil, xadgudub, xadgudub, kufsi, rabshad, nacayb, ciil-diidnimo ama aan habboonayn.
Si aad u gudbiso, ama u soo iibsato diritaanka, wax kasta oo xayaysiis ama dhiirgelinta.
Shirkadda, iyada oo kali ah, waxay go’aan ka gaari doontaa in dhaqankaagu yahay mid waafaqsan Shuruudaha Isticmaalka. Waxaan xaq u leenahay inaanu kormeerno isticmaalkaaga sifooyinka iyo inaan qaadno tallaabo kasta oo aan u baahannahay ama aan ku haboonayn go’aankayaga keligeen ah haddii aan rumeysannahay in dhaqankaagu uu ku xad gudbay Shuruudaha Isticmaalka, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidid u gudbin sharci fulin iyo xaq u lahaanshaha iskaashi kasta baadhitaan, iyo xuquuqda ah in la joojiyo ama laga shakiyo helitaankaaga ama qayb ka mid ah Shabakadda.
Waxaad ogolaatay inaad difaacdo, magdhowdo, oo aan wax dhib ah u geysan shirkadda, xulufadeeda, shatiyeyaashooda, bixiyeyaasha adeegga, iyo sarkaalkooda, agaasimayaasha, shaqaalaha, qandaraaslayaasha, wakiillada, shatiyeyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, , kharashyada, magdhawga, xukunka, abaalmarinta, khasaarihii, kharashyada, kharashyada, ama khidmadaha (oo ay ku jiraan kharashka qareenka macquulka ah) oo ka soo baxaya ama la xidhiidha ku xadgudubka Shuruudaha Isticmaalka ama isticmaalka sifooyinka.
Dhamaan arimaha la xidhiidha sifooyinka iyo Shuruudaha Isticmaalka iyo wixii khilaafaad ah ama sheegasho kasta oo ka soo baxaya ama la xidhiidha (oo kiis kasta, oo ay ku jiraan khilaafaadka aan sheegin ama sheegashada ah), waa in lagu maamulaa oo lagu muujiyaa sida waafaqsan sharciyada Gobolka Ohio iyada oo aan wax saameyn ah ku lahayn doorashooyinka ama khilaafaadka sharciga ama xeerka.